ဖက်ဒရယ်ပညာရေး (အပိုင်း ၅)
Published on Saturday, 24 January 2015 04:00
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို ပိုမို ဆွေးနွေး ပြောဆိုနေကြပြီဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုကို တောင့်တနေခဲ့ကြသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။ အချိန်လွန် လူ့အဖွဲ့အစည်းပင် ဖြစ်နေလေပြီလား။ တရားမျှတမှုမှာ မျက်ကွယ်ပြုထား၍ မရသည့်အပြင် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည်တည်မြဲမှုအတွက် အခရာ ကျလှပါသည်။ လွှတ်တော်တွင်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မီတီတို့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်သည်။
တရားမျှတမှုအတွက် တောင်းဆိုသံတို့မှာလည်း ပိုမို ကျယ်လောင်လာနေသည်။ အလွှာအသီးသီးရှိ ပြည်သူလူထု၏ ရင်ဖွင့်သံ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ ညီးတွားသံ၊ အ်ိမ်ရှင်မများ၏ ဈေးဆစ်သံ၊ လယ်သမားများ၏ ထွန်တုံးသံ၊ ဂျာနယ်လစ်များ၏ စုဖွဲ့သံ၊ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတို့၏ ဖက်ဒရယ် တောင်းဆိုသံ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏ ပေတစ်ရာ လမ်းမထက်က ကြွေးကြော်သံတို့တွင် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ နက်နက်နဲနဲ ပါဝင်နေပါသည်။
မီဒီယာများတွင်လည်း မပါမဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြလာနေကြသည့် တရားမျှတမှုကဏ္ဍမှာ ပျိုးထောင်နေဆဲ ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လူလားမြောက်ရန် ပင်မ အချက်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု အတွက်လည်း တောင်းဆိုသံများ မကြာမကြာ ကြားနေရပြီ။ တကယ်တော့လည်း လူမှုတရားမျှတမှုကို စာသင်ခန်းများက စတင်ရပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ ဖက်ဒရယ်ပညာရေးအတွက် နိဒါန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
အာဏာခွဲဝေ လိုက်ပြီဖြစ်သည့် စာသင်ခန်း
တရားမျှတမှုကို ကျောင်းပညာရေးကတဆင့် လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးသင့်သည်ဟူသော အရေးကြီးလှသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အမြင်တစ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးလိုပါသည်။ မည်သူမဆို ကျောင်းစာသင်ခန်းကို အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် နှစ်အနည်းငယ်မျှတော့ ဖြတ်သန်းဖူးသူချည်းပင် မဟုတ်ပါလား။ “လူမှု တရားမျှတမှုအတွက် ပညာရေး - education for social justice” ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဖက်ဒရယ်ပညာရေးကို တည်ဆောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ စာသင်ကျောင်းများ၊ စာသင်ခန်းများ၊ ရပ်ရွာဌာနများအသီးသီးတွင် စတင်ကျင့်သုံးသင့်သော နည်းနာအချို့ကို မိတ်ဆက် ဆွေးနွေးပါမည်။ ကျောင်းဆရာဆရာမများအနေဖြင့် မည်သည့်ဘာသာရပ်ကို သင်ကြား နေသည်ဖြစ်စေ လူမှုတရားမျှတမှုအတွက်လည်း လှုံ့ဆော်စည်းရုံးသူများဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
အပြုသဘောဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ထံတွင် ရှိသော လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို အသုံးချပြီး အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ပြုမှုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ လူမှုတရားမျှတမှု အခြေခံပင်ဖြစ်၏။ နိစ္စဒူဝပင် ကျောင်း စာသင်ခန်းများ အတွင်း ဆရာဆရာမများမှာ နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်ဖြင့် ဤကိစ္စကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ နောက်ထပ်တဆင့် တက်၍ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ ပိုမို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်အတွက် အားထုတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ “လိုလားအပ်သော အပြုသဘောဆောင်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု” များ မည်သို့ ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းနှင့် တဆင့်ပြီးတဆင့် တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာနေသည်ကို ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ခံစားသိမြင်ခွင့် ပေးရန် အရေးကြီး၏။ ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွင်လည်း သူတို့လေးတွေ ကိုယ်တိုင်ပင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိနေကြောင်းနှင့် ဦးဆောင်ဦးရွက်ခွင့် ရရှိနေကြောင်းလည်း ထင်သာမြင်သာ ဖြစ်စေသင့်ပါသည်။ အာဏာပိုင်သူမှာ သူတို့လေးတွေပင်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာက ဦးစွာ လမ်းညွှန်ပြသ ထားရှိသင့်ပါသည်။ ယခင် နှစ်ကာလများနှင့် မတူတော့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်စု၊ တစ်ဖွဲ့တွင်သာလျှင် အခွင့်အာဏာ တည်ရှိမနေတော့ပါ။ ၂၁ ရာစုပညာရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ဖက်ဒရယ်အိပ်မက်အတွက် စာသင်ခန်းများ အတွင်းတွင် စတင်ပြီး အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရဲစွမ်း ရှိသူများ ဦးရေ တိုးပွားလာတော့မည်။ စာသင်ခန်းအတွင်း ဒီမိုကရေစီ (အပြည့်အ၀) ရရှိလေပြီ။
အပိုဘာသာ မဟုတ်ပါ… တကယ့်ဘာသာ
လူမှုတရားမျှတမှုအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော သင်ခန်းစာများမှာ စာသင်ခန်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော အကျင့်အကြံတို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းလည်း မည်ပါသည်။ စာသင်ခန်းအတွင် သီးသန့် အပိုဖြည့်စွက် သင်ကြားခြင်း တော့လည်း လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်ကို သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့် ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားသည်ဖြစ်စေ ဆရာဆရာမများအနေဖြင့် ဘာသာရပ် အသိ၊ ဗဟုသုတတို့ကိုလည်း အရည်အသွေးမြင့်မြင့် သင်ကြားပြသနိုင်မည်။ ထို့အပြင် တရားမျှတမှု ရှိသော စာသင်ခန်းကိုလည်း တည်ထောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာလည်း ဆရာကောင်း မည်ပါမည်။ မည်သည့်စာသင်ခန်းတွင် သင်ကြားနေသည်ဖြစ်စေ တရားမျှတမှုရှိသော အတန်းကို တည်ထောင်နိုင်ပါသည်။ အသွေးအရောင်စုံ စာသင်ခန်းများထဲတွင်လည်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သလို လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာ ရှိသော စာသင်ခန်းတွင်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ကျောင်းအားလုံး၊ စာသင်ခန်းအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်နေပါသည်။ အဆင့်မြင့် တွေးခေါ်ကြံဆနိုင်စွမ်းများ ပါဝင်နေသည့် ဘ၀တစ်သက်တာလုံးအတွက် ပညာရေးခရီး လမ်းညွှန်လည်းဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများ၏ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဘ၀များနှင့် ဆက်စပ်ပေးပါ။
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ သင်ခန်းစာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းဝယ် အတန်းထဲရှိသည့် စာသင်သားများ၏ နောက်ခံ အခြေအနေများ၊ သိရှိပြီးသား ဗဟုသုတများအပေါ်တွင် သင်ခန်းစာ အသစ်ကို ထပ်ဆင့် တည်ဆောက်ခြင်း၊ တန်ဖိုး ဆက်စပ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းတို့ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လေရာ ဆရာအနေဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ နောက်ခံကို အတန်ငယ်မျှတော့ သိရှိထားသင့်ပါသည်။ သူတို့လေးတွေ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုများ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားနှင့် အခြား အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်းထဲနှင့် စာသင်ခန်းများအတွင်းသို့ သူတို့လေးတွေ ကိုယ်စီ ယူဆောင်လာကြသည့် ကောင်းသော၊ မွန်သောအရာများအပေါ် ဆရာတို့က အသိအမှတ်ပြု ပေးခြင်းနှင့် ထပ်တူ တန်ဖိုးထားပေးခြင်း၊ ခံစားပေးခြင်းမှာ - လူမှုတရားမျှတမှု - အတွက် အကောင်းဆုံးသော သင်ခန်းစာများကို စတင်လိုက်ခြင်းလည်း မည်ပါသည်။
မတူသော အမြင်များနှင့် တကယ့်ပြဿနာများကို မိတ်ဆက်သင်ကြားတော့မည် စာသင်ခန်း….
မနေ့က အတိတ် စာသင်ခန်းများနှင့် မတူတော့ပြီ။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အတွက် ယနေ့ စာသင်ကျောင်းများ အတွင်းတွင် သင်ကြား၊ ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများမှာ ပြဌာန်းစာအုပ်ဘောင်ကို (များစွာ) ကျော်လွန်ရပါလိမ့်မည်။ သင်ကြား ပြသနေမှုများတွင် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာကြီး၏ လက်တွေ့ လူမှုပြဿနာများ၊ ယနေ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များ၊ လက်လုပ်လက်စား လူမှုစီးပွား ဘ၀များနှင့် ဆက်စပ်ပေးခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ကျသော စာသင်ခန်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ စာသင်ခန်း နံရံတို့ကို ဖောက်ထွက်ကြမည့်သူများမှာ ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ နံရံများနှင့် ပြဌာန်းဖတ်စာအုပ်များက ပြင်ပလက်တွေ့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးလောကနှင့် ဆက်သွယ်ပေးရာတွင် အတားအဆီးများ မဖြစ်သင့်တော့ပါ။ အပိတ်အဆို့၊ အတားအဆီးတို့ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပြီ။ အစစ်အမှန်တို့နှင့် ထိတွေ့ခွင့်ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပိုမို အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ပညာရေးဖြစ်လာမည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသတို့တွင် ကျောင်းအတု၊ စာသင်ခန်းအတု၊ ဖတ်စာအုပ်အတုတို့မှာ ရောင်ခြည်တစ်ထောင် အလင်းဆောင်သော သူရိယနေမင်း ထွန်းလင်း ပေါ်ထွက်လာသည်နှင့် တပြိုင်တည်းပင် မြူနှင်းတို့ တစစ ကင်းစင်ဘိသကဲ့သို့ ကွယ်ပျောက်ရပါလိမ့်မည်။ ဤတွင် ရောင်ခြည်တစ်ထောင် အလင်းရောင်မှာ တိုင်းရင်းသားဆရာနှင့် ကျောင်းသားတို့ပင်တည်း။ ပညာအရောင် အစစ်အမှန်ကို ထိတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ပညာမျက်စိ ကိုယ်စီ ရှိတော့မည်။ လင်းပွင့်စာသင်ခန်းတို့ ဤပြည်နယ်တွင် ပေါ်ထွန်းလာနေပြီ။ ဤသည်ပင်လျှင် ဖက်ဒရယ်၏ အစဖြစ်တော့သည်။
မီဒီယာမှာ ပါသမျှ စာသင်ခန်းနှင့် ဆက်စပ်ပေးပါ….
လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစ မြန်မာမီဒီယာ စာမျက်နှာများ၊ သတင်းစာ၊ ဂျယ်နယ်များပေါ်တွင် တင်ဆက်နေသော လက်တွေ့ ပြဿနာများမှာ ကျောင်းစာသင်ခန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပေးရမည့် အကြောင်းအရာများ မဟုတ်ပါလား။ သင်ခန်းစာများကို ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်း လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ တကယ့်ပြဿနာကြီး၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြီးကြီးကို ရွေးချယ်ပါလေ။ ထိုထိုသော ပြဿနာများမှာ မနေ့ကတည်းပင် ရှိနေခဲ့ပါသည်။ အသက် ၃၀ ကျော်များ၊ ၄၀ ကျော်များ၊ ၅၀ ကျော်များ၊ ၆၀ ကျော်များ၊ ၇၀ ကျော်များ တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့မျှ မဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ ကလေးငယ်များနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများက ဖြေရှင်းပေးနိုင် ကောင်းပါရဲ့။ သူတို့လေးတွေ၏ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်ပင် မဟုတ်ပါလား။
ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်လည်း ရွေးချယ်ပါစေ။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအတွက် လူမှုရေးဘာသာဖြစ်စေ၊ အခြားဘာသာဖြစ်စေ သူတို့က ဆက်စပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆရာကသာ မေးလိုက်ပါ။ မေးရဲဖို့တော့ လိုပါမည်။ “ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ အပြင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ၊ မင်းတို့ ဘာကြားထားသလဲ”။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာပြဿနာတို့ကို ကျောင်းသားများက ရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းဆရာ အသင်ကိုယ်တိုင် မသိသေးသော ဆရာများသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နေသည့်သတင်း၊ ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြပွဲ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသ စစ်ပွဲသတင်း၊ လက်နက်ဆန်းများအကြောင်း၊ သတင်းထောက်ကို ရက်ရက်စက် သတ်ဖြတ်လိုက်သည့် သတင်း၊ လာမည့် AIDS နိုင်ငံတကာနေ့တွင် ကွန်ဒုံအခမဲ့ ဝေမည့်သတင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ကလေးမုန့်ပဲ သရေစာများကို ကျောင်းတွင် မရောင်းရဟူ၍ တားမြစ်ထားသည့်သတင်း၊ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ခရီးသည်တင်ကားကို ဓါးပြတိုက်သည့် သတင်း၊ ရှေ့အပတ် သောကြာနေ့တွင် တစ်မြို့လုံး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြမည့်အတွက် ကျောင်းပိတ်သည့် သတင်း၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေ၏ ကောင်းကျိုး-ဆိုးကျိုးသတင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ် မထိုးနိုင်သေးသည့် သတင်း၊ အာဆီယံတွင် မြန်မာတို့ ရာသက်ပန် ဥက္ကလုပ်မည့်သတင်း၊ အဆိုတော် rihina မင်္ဂဆောင်သည့်သတင်း၊ ကြေကွဲမှုများစွာဖြင့် မိုးဟေကို သီလရှင် အပြီး ၀တ်သွားသည့် သတင်း၊ အိုဘားမား နောက်တစ်ကြိမ် မြန်မာပြည် လာသည့်အခါ နမ်းမည့်သူများ စာရင်း၊ လစာနှင့် ကုန်ဈေးနှုန်းသတင်း… …။ ဆရာဆရာမများကသာ သက်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာအလိုက် ပြင်ပလောကအကြောင်းကို မေးမြန်းလိုက်ပါလေ…။ မေးရဲရုံမျှသော သတ္တိတော့ လိုပါလိမ့်မည်။
ပိုမိုတရားမျှတသော ဖြေရှင်းချက်များ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဖက်ဒရယ်ပညာရေးကို ဖတ်စာအုပ်များချည်းနှင့် တည်ဆောက်၍ မရပါ။ ပြင်ပလက်တွေ့ နိုင်ငံရေးဘ၀၊ လူမှုလောကနှင့် ဆက်စပ်ထားသော မေးခွန်းများဖြင့်သာ တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သံလွင်တိုင်းမ်ဂျာနယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ Jan. 2015